Waa maxay Server khaas ah oo Virtual ah? | Wararka Gadget
Waxaa loo yaqaan sida VPS (Server Virtual Private ama server dalwaddii gaarka loo leeyahay) inay xijaab dalwaddii gudahood server a jirka meesha mashiinada mid ama ka badan dalwaddii waxaa socda. virtualization The kaas oo xilli ciyaareedkan waxaa loola jeedaa ka kooban qaybintii server la iibiyay jirka hal ama in ka badan macquul ah server heegan ah ama VPS in, inkastoo uu la wadaago qalabka la mid ah, waxaa lagu soocaa midba midka kale. VPS kasta wuxuu leeyahay nidaamka qalliinka u gaar ah, kaas oo ka mid ah dadka isticmaala, cinwaanada IP, xusuusta, geeddi socodka, iyo wax kasta oo ay qayb ka tahay nidaam.
Si aad u sharaxdo hab fudud, haddii aan la gooyaa laga yaabaa server a jirka gelin xaleef, jeex kasta noqon lahaa VPS ah. Waxa ugu fiican oo ku saabsan noocan ah mashiinada dalwaddii waa in haddii qaybtii ayaa na taabtay waa 10% oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee server la taaban karo, waxaan yeelan doonaa in 10% khayraadka xaqiijiyay iyo, mararka qaarkood waxaan u baahan nahay more muddo ka dalbanayaan daqiiqado gaar ah, sidoo kale waan awoodnaa ka faa'iideysta ilaha dadka kale VPS, inta ay yihiin oo aan la isticmaalo waqtiga waxaan u baahan nahay taageeradiina.
1 VPS, wax waliba waa faa'iidooyin
2 Farqiga u dhexeeya u heellan, la wadaago iyo server-yada VPS
2.1 Server u heellan
2.2 Server wadaag ah
2.3 VPS server
3 Qaybta adag: helitaanka alaab-qeybiye wanaagsan
VPS, wax waliba waa faa'iidooyin
Waxa intaa dheer in faa'iido kor ku xusan, waxaa sidoo kale waa sababta kale ee VPS xiiso leh: waxaan bixin doonaa oo keliya, waayo, waxa aan u baahanahay in la isticmaalo. Tusaale ahaan, haddii aan server a jirka la X-GB ee RAM iyo waxaan u baahan nahay in aan ballaariyo qalabka la processor ama disk adag, wax caadi noqon lahayd in ay dami mishiinka, rakibi qayb cusub oo mar kale shid . Haddii loo baahdo ballaariyo kooxdeena ku saleysan VPSwaan sameyn karnaa iyadoon loo joojin, taas oo inaga badbaadin doonta waqtiga, shaqayn doonta oo wax soo saar noo noqon doonta. Thanks to this aan awoodin in ay kiraystaan ​​oo keliya waxa aan u baahan tahay waqtiyada oo dhan, kaas oo sidoo kale ay hubisaa in aannu yeelan doono gacanta ku weyn waxa aynu ku qaataan noqon doonaa.
Farqiga u dhexeeya u heellan, la wadaago iyo server-yada VPS
Server u heellan
Server u heellan ayaa ah mashiin loogu talagalay adeegga websaydhka in macaamiil loo soo bandhigay qandaraas kiro gaar ah. macmiil kasta faa'idaysanayo waxqabadka server ay qandaraas la'aan ku xiran tahay kheyraadka ka server kale ama macaamiisha dibadda. Guud ahaan, server u gaar ah waxaa marti xarunta xogta shirkadda na dalabyo adeegga ka. Qorshaha Tani waa ikhtiyaarka ugu fiican ee loogu talagalay macaamiisha qaba website a xirfad leh oo u baahan in ay ka faa'iidaystaan ​​waxqabadka ugu badan ee mashiinka a in ay aad u marin buuxa u sabab u ah sida ay mashruuca ayaa la qorsheeyay on internetka.
Server wadaag ah
server la wadaago ayaa sidoo kale makiinadaha qorsheysay in adeeg web laakiin, sida aynu malayn karaa magacooda, waxay ku kala duwan ka server heegan ah in la wadaago waxaa isticmaala macaamiil badan. Macaamiisha in shaqada on server la wadaago isku mid ah ayaa sidoo kale la wadaagto isticmaalka iyo waxqabadka ee server ka, sidaas oo kale waa ka raqiisan. Marka laga dambe, la wadaago iyo server heegan ah ayaa laga yaabaa in la barbar dhigo guri kiradiisa: hadii aan lacag u leeyihiin in ay lacag, waayo, waxaa fiican inaad ka fool ah kharashka iyo keli live. Haddii aadan haysan lacag kugu filan oo aan, waxaa fiican in la helo hal ama in ka badan hal qol. Qorshaha la wadaago wuxuu noqon karaa fikrad wanaagsan markaad bilaabeysid mashruuc web.
Server VPS waa qayb ka mid ah server-ka gebi ahaanba ka madaxbannaan qaybaha kale ee nidaamka. Waxay yeelan karaan khayraadka badan ama ka yar ku xiran tahay sifooyinka guud ee mashiinka iyo waxa aan doonayaa in aan mushaar. macmiilka A la server VPS ah raaxaysan karaan Tilmaamo gaar ah, qaab iyo xoog oo aan haysan si ay u wadaagaan, laakiin haddii macaamiisha kale on mashiinka la mid ah aan la isticmaalayo ay xijaab, waxaan sidoo kale ka faaiidaysan karaan qayb ka mid ah khayraadka.
Qaybta adag: helitaanka alaab-qeybiye wanaagsan
Markaad nadiifiso aragtida quruxda badan, waxay timaaddaa tan ugu adag: hel alaab-qeybiye wanaagsan. Waxaan leenahay doono dhibaatadan isla ficil adeeg kasta oo ay ina siinayaan, sida telefoonada. Si aad u dhigay kiis wax yar laga badbadiyay, aynu qiyaasi aan qandaraas adeeg internet ah oo ah shirkad lagu magacaabo Interfacinet. Like shirkadaha oo dhan, Interfacinet doonayo in uu gaaro gargaarka weyn, sidaas darteed waxa ay qaadataa macaamiisha iyo aad u badan, ilaa ay ka gaarayso heer ay u gudan waydo ay ballanka. Waxaa soo baxday in Interfacinet heshiis si ay ugu deeqdo malaayiin iyo malaayiin users gaadhay, laakiin ay madal ma taageeri sida baabuurta badan. Waa maxay waxa kaliya ee dhici kara? Waa hagaag waxa xawaaraha iyo tayada xiriirkeenu wuxuu noqon doonaa mid aad u deggan waxaana laga yaabaa inaan la kulanno goynta iyo ka goynta. Iyada oo xaaladdaasi, Intrafacinet ma noqon doono doorasho wanaagsan haddii aan rabno in aan ku raaxaysan adeeg internet wanaagsan. Tusaale kale oo ka fudud ayaa ah "lacag bixinta badan" duullimaadyada. Haddii diyaarad uu leeyahay 100 kursi, 110 waxaa loo iibiyey iyo Waana oo dhan, waxaa jiri doona 10 rakaab ah oo aan awood u yeelan doonaan si ay u helaan on diyaarad in.
Si looga fogaado dhibaato marka ay shaqaaleysato VPS ah, waxa ugu horeeya ee aad leedahay si aad jeeg waa in ay kaabayaasha waxay xaqiijin doontaa in aan had iyo jeer ku raaxaysan karaan adeegga ugu wanaagsan, labadaba caqli badan oo VPS sida in kasta oo kale oo ka weyn mid ka mid ah. Sidoo kale waa in ay bixiyaan suurtagalnimada ee waasicinnay waqti kasta haddii ay dhacdo baahida loo kordhiyo. Waa sida haddii wadaha taleefan bixiyeen 100% caymiska dunida oo dhan: maleh halka aan tegey iyo wixii aan sameeyey, waxaan had iyo jeer lahaa caymiska iyo wicitaanada waxay bixiyaan lahaa tayada codka weyn, halka ay jiraan shirkadaha kale in noogu Goodiyeysay dayaxa, laakiin markaas maahan inaan ka soo wici karno gurigeenna.
Qodob kale oo lagu qiimeeyo qorshooyinka VPS ayaa ah in la hubiyo in la maareeyay. Waa maxay tan macnaheedu? Waa hagaag waxa waa martigelinta wax walba maamusha. Haddii aynu nahay dadka isticmaala aan lahayn aqoon ku filan si ay u sameeyaan, maaraynta VPS waxaa laga yaabaa in aanay noqon fikrad aad u wanaagsan. Oo xataa haddii aan awood u, ha noqon bashaash, waa ay jiraan wax ka khayr badan daynin qof kale shaqo wasakh ah noo?
Waxaa cad in faa'iidooyinka oo dhan waa in la tixgeliyaa in mashruuc kasta oo aan rabno in aan fulin: imtixaanka inta aan la isticmaalin. In qalabka korontada waxaan leenahay damaanad ah in noo hubinayaa in aan ka soo kaban doono 100% of our lacag haddii aan aan ku qancay oo waannu soo noqon doonaa in 15 maalmood ee ugu horreeya ka dib markii ay iibsatay. Waxa caadi ah in adeegyada sida VPS waa in bixinta oo aan ogayn wixii adeeg waxay u eg tahay, taas oo noo keeni kartaa si aad u hesho yaab xun marka ay goori goor tahay.
Waa maxay aadan leedahay in la sameeyo waa loo hubiyo in aadan bixin wax aan la kulmo aad ka filayso, si taxaddar iyo eegno wanaagsan at print ganaax ah shirkadaha martigelin ka hor ay shaqaaleysato adeegyada aan la kulmi kartaa filayo.
Haddii aad u raadineyso VPS mashruucaaga, waa kan Koodhadhka 'Promo code' ee 'Professionalhostinging' oo ka socda Couponshost, si loo tijaabiyo martigelinta ka hor intaadan bixin. Dabcan, waxaa jira dad badan oo dheeraad ah fursadaha suuqa si eegto oo kaliya mid ka mid ah in la kulmo shuruudaha in baahida mashruuca iyo sidoo kale suudadka aad miisaaniyadda aad maamuli.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Waa maxay Server khaas ah oo Virtual ah?
Sida loo isticmaalo loona raaxeysto MSQRD, barnaamijka moodada